Radisson wuxuu qorsheynayaa huteellada Nigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger iyo Guinea
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Radisson wuxuu qorsheynayaa huteellada Nigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger iyo Guinea
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Cote d'Ivoire • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • Moroko News • News • Wararka Jabhada Niger • Wararka Nigeria • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Tunisia War Cusub
Istaraatiijiyadda kobcinta Radisson Hotel Group ee Afrika waa qorshe muhiim ah oo loogu talagalay Destination 2022, oo ah qorshe howleed istiraatiiji ah oo kooxdu waddo shan sano, ujeeddadiisuna tahay inay ka mid noqoto saddexda shirkadood ee ugu horumarsan adduunka.
Kooxdu waxay leedahay 90 hudheel iyo 18,000+ qol oo hawlgal iyo horumarin ka socda 31 waddan, waxayna qorshaynaysaa inay gaadho 130 hudheel iyo 23,000+ qol oo Afrika ah sannadka 2022-ka.
Andrew McLachlan, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare, Horumarinta, Saxaraha ka hooseeya Afrika, Kooxda Radisson Hotel, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno 10 heshiis oo cusub oo huteel ah sagaal bilood oo kaliya, taas oo u dhiganta saxiix cusub bil kasta. Saxiix kasta wuxuu si istiraatiijiyad leh ula jaan qaadayaa si loo gaarsiiyo qorshaheena horumarineed ee shanta sano ah, iyada oo loo marayo gelitaanka suuqyada cusub, soo bandhigida noocyo cusub iyo gaarsiinta kobaca miisaanka leh ee meelaha ugu muhiimsan Afrika. Sannadkan, waxaan ku dari doonnaa 1,300+ qol faylalkayaga Afrika waxaanan qorsheyneynaa inaan sii wadno kobacaas la dedejiyey iyada oo loo sii ballaarinayo suuqyada muhiimka ah ee ku teedsan qaaraddan soo koraysa. ”
Marka lagu daro Radisson Hotel & Apartments Abidjan Plateau iyo Park Inn oo ay leeyihiin Radisson Lusaka Longacres hoteelo lagu dhawaaqay horaantii sanadkan, sideeda heshiis ee cusub ee haray waxaa ka mid ah:
Ururinta Radisson Ikoyi Lagos, Nigeria
Ururinta 'Radisson Collection', oo ah koox-kooxeedka qaab nololeedka ugu sarreeya ee guryaha hudheellada gaarka ah ee ku yaal meelo gaar ah ayaa ka dhigaya kulankiisii ​​ugu horreeyay Ikoyi, Lagos waana 3rdHotelka Radisson Collection ee Afrika. Huteelkan raaxada leh wuxuu ku yaali doonaa aag caan ah oo ku yaal gudaha Jasiiradda Lagos, oo ku taal geeska Lagos Lagoon.
Waxaa loo qorsheeyay inuu furmo sanadka 2020, hudheelka ayaa waxaa ka muuqan doona 165 qol, oo ay ku jiraan heerarka casriga iyo qolalka fulinta iyo qolka madaxweynaha. Hoteelku wuxuu yeelan doonaa cunto iyo cabitaan ballaaran oo leh lix meelood oo kala duwan oo loogu talagalay waayo-aragnimada cuntada ee xusuusta leh, oo ay ku jiraan maalinta oo dhan cunnada iyo makhaayadaha gaarka ah iyo sidoo kale makhaayad kafeega iyo saddex baarar oo abuuri doona muuqaal bulsheed firfircoon. Hoteelka waxaa lagu soo bandhigi doonaa shirar ballaaran iyo aagag dhacdooyin ah, oo ka kooban siddeed xarumood oo kala duwan oo martigelin kara in ka badan 400 oo qof. Meelaha bulshada waxaa ka mid noqon doona spa, jimicsi iyo barkad.
U soo bandhigida hudheelkii ugu horreeyay ee Radisson ee loo yaqaan 'Nigeria', oo ah nooca sare ee keena adeegga shakhsi ahaaneed ee goobaha casriga ah iyo kuwa casriga ah.
Waxay ku taal Ikeja, caasimadda Gobolka Lagos, hudheelku wuxuu ku yaal Mobolaji Anthony Highway, waa waddo weyn oo isku xirta Ikeja iyo inta kale ee Lagos. Madaarka caalamiga ah, oo ka shaqeeya 50% dhammaan taraafikada hawada Nigeria wuxuu ku yaal 1km hudheelka.
Hoteelka ayaa ka kooban 92 qol oo ay ku jiraan qolal caadi ah iyo kuwo casri ah iyo waliba qolal loogu talagalay inay ku farxaan dareenka. Waxay sidoo kale soo bandhigtay saddex meelood oo kala duwan, meelaha laga cunteeyo iyo cabbitaannada maxalliga ah, oo ay ku jiraan makhaayad laga cunteeyo maalintii oo dhan, baarar iyo barkadda dabaasha Goobta kulanka & dhacdooyinka, waxaa ku jiri doona saddex meelood oo kala duwan iyo xarun ganacsi. Intaas waxaa sii dheer, hudheelka wuxuu leeyahay qol gaar ah oo loogu talagalay shaqaalaha diyaaradaha, hudheello jimicsi, barkadda dabaasha.
Park Inn oo ay leedahay Radisson Apartment Lagos VI, Nigeria
Sidoo kale sameynta ugu horreysa ee magaalada Lagos waa sumadda sare ee xawaaraha sare, Park Inn ee Radisson, oo furi doonta guryo adeegyo laga helayo, oo ku yaal meel u dhow Adetokunbo Ademola Street, oo ah waddada weyn ee dhex marta Victoria Island.
Waxay ka kooban yihiin 55 guri oo hudheello casri ah, hudheelku wuxuu kaloo bixin doonaa afar goobood oo cunto iyo cabitaanno ah oo ka kooban makhaayad laga cunteeyo oo dhan, baarar iyo laba dabaq oo banaanka ah. Aagga kulanka iyo dhacdooyinka waxay ka kooban yihiin saddex qol oo dabacsan oo daboolaya 120 sqm. Goobaha firaaqada waxaa ka mid ah goob jimicsi iyo goob lagu dabaasho.
Radisson RED Hotel Abidjan waa Radisson Hotel Group oo ah saxiixa labaad ee Radisson RED ee Afrika wuxuuna noqon doonaa hudheelkii ugu horeeyay ee qaab nololeed sare leh ee Abidjan, oo ah caasimad weyn oo Afrika ah. Hoteelku wuxuu ku yaali doonaa Boulevard de Gaulle, cirifka lagoon ee Plateau, degmada ganacsiga ugu horreeya ee Francophone West Africa, iyo meesha ugu habboon ee magaalooyinku ku habboon yihiin ee astaan ​​u noqota mid si xamaasad leh u ciyaara.
Huteelka cusub ee la dhisay, oo qorshuhu yahay inuu furmo 2021, wuxuu yeelan doonaa 165 qol oo ka kooban qolal heer sare ah iyo qolal ku dhejisan sawirro derbi geesinimo leh iyo naqshad leh aragti. Cuntada hudheelku bixinayo waxaa ka mid noqon doona Redeli, qiimo sare oo leh nafta baarka iyo sidoo kale OuiBar, baarka dusha sare iyo teeraar leh magaalo dusha sare leh iyo aragtiyo badeed. Goobaha firaaqada waxaa ka mid noqon doona barkadda dabaasha ee saqafka sare iyo qolka jimicsiga oo si buuxda u qalabaysan, iyadoo abuureysa jawi bulsheed oo is dhexgal ah. Goobta kulanka iyo dhacdooyinka waxaa lagu jebin doonaa dhaqankii istuudiyo munaasabad casri ah iyo afar qol oo akhris ah.
Maaddaama sumcadda ugu horumarsan ee Afrika, Radisson Blu, ay geli doonto xarunta dhaqaale ee ugu horreysa Afrika, Casablanca, iyada oo la furi doono Radisson Blu Hotel, Casablanca sannadka 2019. Hoteelku wuxuu ku yaal degmada ganacsiga magaalada iyo irridda albaabka soojiidashada waaweyn sida soo jiidashada leh ee Old Medina (magaaladii hore), Casablanca Marina iyo Masaajidka Xasan II, oo ah masaajidka labaad ee ugu weyn adduunka.
Hoteelka cusub ee la dhisi doono ayaa waxaa ka muuqan doona 120 qol, oo isugu jira qolal casri ah iyo qolal wanaagsan. Ka helitaanka dhiirrigelinta cunnooyinka maxalliga ah, goobaha cuntada iyo cabitaannada waxaa ku jiri doona makhaayad iyo laba baarar, oo leh goobo firaaqo oo ka kooban qolka jimicsiga oo si buuxda u qalabaysan iyo qurxinta qurxinta. Hoteelka kulankiisa ballaaran ayaa laga dhisi doonaa bed dhan 456m².
Park Inn oo uu qoray Radisson Tunis:
Kooxda Radisson Hotel waxay soo gashaa caasimada iyo magaalada ugu weyn dalka Tunisia iyadoo la socota Park Inn oo uu leeyahay Radisson Tunis. Hoteelka ayaa laga dhigi doonaa bartamaha magaalada mashquul badan, oo 5km oo kaliya u jirta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Tunis-Carthage, iyadoo si fudud loo mari karo wadada weyn. Waxay sidoo kale u jirtaa masaafada u jirta Saldhigga Tareenka ee Tunis iyo degmada ganacsiga ee Avenue Habib Bourguiba iyo Avenue Mohamed V. Madiina oo ay ku taal in ka badan 700 oo taallooyin, qasriyo, qabuuro iyo Masjidka Weyn ayaa u jira hoteelka 1.5km oo keliya.
Hoteelka ayaa waxaa kasoo muuqan doona 102 qol, oo isugu jira qolal caadi ah iyo qolal. Ikhtiyaarrada cuntada iyo cabbitaannada waxaa ku jiri doona makhaayad iyo baarka dusha sare, halka goobaha firaaqada lagu dari doono jimicsi. Hoteelka ayaa si wanaagsan loogu qalabeyn doonaa shirarka iyo munaasabadaha oo leh goob ballaadhan oo ballaadhan, oo laga dhisi doono aag 261m² ah kana kooban saddex qol shirar, saddex qol shirar iyo qol gole ah.
Gelitaanka suuq cusub oo Afrikaan ah, dhismaha cusub ee Radisson Blu Hotel, Niamey wuxuu furi doonaa sanadka 2019. Niger, caasimada Niger iyo xarun ku taal Francophone West Africa waa qeyb ka mid ah ECOWAS sidoo kale waxayna xoojineysaa booska istiraatiijiga ah ee Radisson Hotel Group ee Galbeedka. Afrika. Huteelka ayaa hogaamin doona suuqa sida Niamey maadaama uu buuxiyo boosaska hudheelada tayada leh ee caalamiga ah ee gobolka ku yaal.
Hoteelka oo ka kooban 196 qol ayaa waxaa ku jiri doona shan nooc oo qollo kala duwan ah, oo ay ku jiraan madaxyo casri ah iyo qolal boqortooyo leh. Goobaha cuntada iyo cabitaanku waxay sidoo kale ku deeqi doonaan xulashooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin laba maqaayadood, laba baarar iyo qolka fadhiga fulinta. Shirka ballaaran iyo aagagga dhacdooyinka wuxuu ku fidsan yahay aag dhan 1252m², oo ay ku jiraan qolka shirarka, xarunta ganacsiga iyo qolal shirar kala duwan. Hoteelka ayaa sidoo kale soo bandhigi doona spa, qolka jimicsiga iyo barkadda dabaasha.
Radisson Blu Hotel Conakry, Jamhuuriyadda Guinea
Radisson Blu wuxuu galaa Conakry, caasimada Guinea iyo xudunta Francophone West Africa waxaana loo qorsheeyay inuu furmo sanadka 2019. Hoteelka ayaa hogaamin doona suuqa sare ee hudheelka sare ee Conakry oo leh meesha ugu muhiimsan, marin u helka, iyo calaamadeynta sare ee caalamiga ah.
Hoteelka waxaa si ku habboon loo ag taagay bartamaha magaalada waxaana ku hareereysan Xarunta Shirarka, Palais du Peuple, Isbitaalka Qaranka iyo safaarado badan. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Conakry wax ka yar 10km ayay u jirtaa.
Huteelka waxaa ku yaal 123 qol jiif, oo ka kooban shan nooc oo qollo kala duwan ah, oo ay ku jiraan laba qol oo madaxweynaha ah. Cunnada iyo cabitaanka la bixinayo waxaa ka mid ah makhaayado maalintii oo dhan laga cunteeyo iyo maqaayado qaas ah, qolka barkadda iyo baarka. Aagga kulanka iyo dhacdooyinka ayaa ka sii ballaaranaya 415m² oo ka kooban afar qol oo lagu beddeli karo. Hoteelka ayaa sidoo kale soo bandhigi doona spa, qolka jir dhiska iyo barkad lagu dabaasho.